Vaovao - SmartMe
Dom » Vaovao
Te-ho vaovao ve ianao? Afaka mahita ny vaovao farany eto amin'ny tontolon'ny teknolojia miaraka aminay ianao. Manaraka ny vaovao amin'ny indostrian'ny smartphone sy ny fampiharana ho azy ireo izahay. Manoratra momba ny zava-baovao ara-teknika, gadget ho an'ny trano sy solosaina koa izahay. Ampio amin'ny tianao indrindra ary vakio ny vaovao tsara indrindra.
paoma, finday avo lenta
Apple dia mijanona tsy manampy charger amin'ny boaty misy finday avo lenta heverina fa tsy ahiahy momba ny planetantsika. Raha ny fahitana azy, noho ny fanesorana ny charger tamin'ny setan'ny varotra dia nahatratra 860 XNUMX mahery ny orinasa. metaly taonina. Tian'izy ireo hikarakara ny tontolo iainana ankoatr'izay, noho ny kely ...
bang & olufsen, Miseho Beosound, mahay miteny
Bang & Olufsen dia namokatra fitaovana fampandrenesana avo lenta nandritra ny fotoana ela be. Ny mpandahateny fanamafisam-peo farany noforonin'i Benjamin Hubert avy amin'ny maso ivoho LAYER dia gaga amin'ny firafiny manify sy ny endriny miavaka. Ny endriny manify sy manaitra ny Beosound Emerge dia manify, ...
paoma, amin 'ny Conference
Manakaiky haingana ny kaonferansa Apple "Spring Loaded" an'ny aprily. Manontany tena ve ianao hoe aiza no hahitanao ny hetsika farany? Eto izahay mba hanampy! Manakaiky ny kaonferansa Apple, jereo ny toerana ahafahanao mijery azy! Live stream avy amin'ity hetsika ity ...
Raha mampiasa ny mpanampy Google ianao hifehezana ireo fitaovana ao an-tranonao sy hampiasa ny fampiharana Google Duo, dia fantatrao tsara tsara ny fampandrenesana Google Home. Na izany aza, te hampiditra karazana hafa amin'ny fampiharana azy i Google. Toa mahaliana izany! Ho hitantsika ...
15 Aprily 2021
Mpanampy Google, google home, google akany
Ny fampisehoana Google Assistant vaovao dia hanampy ny olona variana hahita finday avo lenta very. Mahaliana fa ho ilaina izany na dia ho an'ny telefaona mandeha eo ambanin'ny rafitra fiasan'ny iOS aza. Google Assistant dia hanampy anao hahita telefaona very azon'ny Google Assistant ao ...
Sony Xperia 1 III avo dia avo ny vidiny. Tena mendrika mandoa izany ve?
fizarana voalohany, Sony, Sony Xperia, sony xperia 1 III
Ny presale an'ny smartphone Sony Xperia 1 III dia efa nanomboka. Ny vidin'ny telefaona dia avo dia avo, ary ny finday avo lenta hatreto dia tany Russia ihany no niseho. Jereo izay mendrika ho fantatra momba azy. Sony tsy miasa mangina ary mamono olona ...
Ny mop elektrika FC 7, na Kärcher dia mitombo
Kärcher, mop elektrika
Kärcher, ilay orinasa mpanasa fanasan-tsindry fanta-daza, dia mitombo hatrany. Ny mop elektrika farany ananany dia miditra amin'ny portfolio-dry zareo ankehitriny. Satria tsara kokoa ny 4 noho ny 2 FC 7 no sainam-pirenena vaovao ao amin'ny 'fiaramanidina' vokatra fanadiovan-tany nataon'i Kärcher ....
Vaovao, Smart Home
Fampiroboroboana lalao sy herinandro Smart Home ao amin'ny x-com!
fisondrotana, manan-tsaina an-trano, x-Kom
Tonga ny fotoana andrasan'ny mpankafy ny fitaovana an-trano rehetra sy ny mpilalao gamer. Ao amin'ny X-Kom, manana herinandro manokana izahay ahafahantsika manararaotra fampiroboroboana maro hahafahantsika mividy fitaovana voafantina hatramin'ny 30%. mora vidy kokoa. X-com ...
TP-Link dia manolotra ny rafitra harato Deco X90
14 Aprily 2021
deco xc90, ny router, tamba-jotra tsy misy tariby, TP-rohy, wi-fi harato, Wifi
Ny fitomboan'ny isan'ny fitaovana marani-tsaina tsy mitsaha-mitombo ao an-tranontsika dia mila fifandraisana Internet miorina sy haingana. TP-Link dia mahafaly ny andrasan'ny mpanjifa ary manolotra ny rafitra jiro telo-polo Deco X90 amin'ny tsena, izay manohana ny fenitra ...
Jereo ny sary tsara indrindra nalaina tamin'ny smartphone Xiaomi!
Xiaomi dia mikarakara ny andiany faha-3 an'ny ShotByMi Photography Challenge, ny mpankafy dia afaka mahazo famoronana ary mahazo loka sarobidy miaraka amin'izay 🙂 ShotByMi Photography Challenge dia fifaninanana sary momba ny finday isan-taona izay mikendry ny hampiroborobo ny fahaiza-mamorona sy ny haitao. Mandritra ny fotoana ...
Skuter vorona farany any Polonina. Fantatray ny vidiny sy ny antsipiriany
vorona, môtô, fizarana voalohany
Ny fisafidianana ny scooter elektrika mety dia tsy zavatra mora atao, indrindra fa misy modely maro samihafa eny an-tsena. Ny malaza kokoa no atambatra ankehitriny ny scooter avy amin'ny Bird-One sy Air. Mazava ho azy fa vao manomboka ny scooter vaovao roa ...